GAROWE: Dhismaha Garoonka cusub ee diyaardaha oo gabo gabo maraya [ Warbixin]
GAROWE- Magaalo madaxda Puntland ee Garowe ayaa waxaa dhowaan la furi doonaa garoon cusub ee diyaardahu soo caga-dhigtaan kasoo in muddo ah dhismihiisa ay wadey shirkad laga leeyahay dalka Turkiga.
Garoonka cusub ee diyaaardaha ayaa lacagtii hore ee lagu bilaabey dhismihiisa waxaa bixisey hay’ada Kuwait Fund kadib markii heshiis la gashay dowladii hore ee Madaxweyne Cabdiraxman Farole halka dhameytirka heshiisyadaan iyo qandaras biixnta dhameystireen Dowlada Madaxweyne Gaas.
Qaabka lacag bixinta hehsiiskaan oo ka koobnaa labo weji ayaa sida warsidaha Garowe Online fahansan yahay Kuwait Fund waxay ku bixisay wajiga hore 5 Milyan dollar halka wajiga labaad ay ka baaqsatey iney bixiso aduun gaaraya Shan Milyan dollar taasoo khatar galisey in mashruucaan gabi ahaanba bur-buro.
Dadaal badan ay sameyeen madaxweynihii hore ee Puntland, xildhubaano iyo ganacsato kasoo jeeda gobolka Nugaal ayaa waxaa ay suurtagliyeen iney dhiirigalinyeen shirkada gacanta ku haysa dhismaha garoonka iney wado Mashruuca lagu dhameytirayo Gagidaan iyadoo dhinaca kale Madaxweyne Cabdiweli Maxamad Cali Gaas dhiirigalin balaaran sameeyey kadib markii uu ku biiriyey dhameytirka mashruucaan aduun gaaraya 2.5 Milyan dollar.
Dadweynaha Puntland gaar ahaan kuwo gobolka Nugaal ayaa aad u soo dhoweeyey talabada Madaxweyne Gaas ee ku aadan sidii loo dhameytiri lahaa mashruucaan oo lacagtiisa laga sugayey hay’ada Kuwait Fund taasoo dhiirigalisay dhamaan dhinacyadii howshaan dhameytirkeeda isu xilsaarey.
Waxaa sidoo kale door xusid mudan doorka mas’uuliyada leh ay ka qaateen madaxweynihii hore ee Puntland, qaar ka tirsan ganacsatada iyo xildhibanada gobolka Nugaal kuwasoo ku guuleystey iney ururiyaan lacago lagu fulinayo dhameytirka mashrucaan.
Dhinaca kale warsidaha Garowe online oo booqdey dhismaha garoonka diyaardaha ayaa ogaadey in shirkada gacanta ku haysa dhismahaan ay dhowaankeentey daamuurkii iyo makiinadii qaban laheyd shaqada ugu dambeysa mashruucaan kasoo la filayo in lasoo gabagabeeyo inta u dhexeysa bilaha October iyo November.
Garoonkaan oo lafilayo in diyraadadaha Waaweyn ku soo dagaan ayaa howshaan gacanta lagu hayo marka ay dhamaato waxaa u baahan yahay waxyaabo yar yar ah kuwasoo muhiim u ah in si buuxda u howlgalo iyadoo kharashka lagu fulinayo laga sugayo Dowlada Puntland iyo ganacsatada gobolka.
Shacabka Puntland iyo dowladooda ayaa waxaa ay mudan yihiin bogaadin kadib markii si buuxda isugu tashadeen markii la waayey mashruucaan kharashkii loogu talagaley dhameytirkiisa.
Garoonkaan ayaa sida howlwadeenada gacanta ku haya u sheegeen warsidahaan ayaa waxaa la qorsheynayaa inuu shaqo bilaabey sanadakaan dabayaaqadiisa.
Madaxweyn Puntland oo aqabaley go'aankii xasaanada lagala noqdey xukuumadiisa [Dhageyso]
Puntland 18.07.2017. 13:41
​Somaliland: Wasiir Faratoon "Puntland waan ka heshiinay inaysan carqaladayn doorashadeena"
Somaliland 11.08.2017. 04:38
WARBIXIN: Wasiiradii Haweenka Puntland sidee ku waydey xilka golaha Wasiirada
Puntland 14.08.2017. 01:33